Iza no nahita "ny hafatry ny pentekosta"? | Hevitra MPANOHARIANA
Iza no nahita "ny hafatry ny pentekosta"?
2007-05-30 @ 12:20 in Finoana
Mbola resaka pentekosta ihany na dia zavatra hafa indray aza. Efa fantatry ny mpanara-baovao tsara fa namoaka ny hafatry ny pentekosta ny filohan’ny fiangonana efatra mandrafitra ny ffkm. Tamin’ny alarobia (heriny) na alakamisy dia efa nambaran’ny gazety ambangovangony izany. Saingy iza moa no tena nahita na nahare ny votoatiny manontolo ?
Raha vao nahatonga izany any amin’ny tonian’ny fanoratana any amin’ny fampahalalam-baovao isan-karazany ny gazety dia misintona izay azony tsoahina avy ao amin’ny hafatra. Tsy namoaka manontolo ny hafatra kosa ry zareo satria tsy nividy pejy manokana ho amin’izany i Vohipiraisana (ny foiben’ny ffpm natao ho foiben’ny ffkm vonjimaika ihany koa aloha). Izay no nampahafantarana ny vaovao fa tsy namakiana na nametrahana azy manontolo. Manaraka izany indray dia tsy novakiana tao am-piangonana nandehanako tamin’iny alahady ihany koa ilay hafatra avy amin’ny filoham-piangonana efatra mirahalahy. Tena nandrasana mihitsy tamin’ny filazan-draharahan’ny fiangonana fa niandry vasoka fotsiny. Eto Antananarivo ve dia mbola tsy naharay ny hafatra ihany koa ? gaga ihany ny tena amin’izany.
Nanontaniana ny olom-pantatra raha naheno fa na tsy tandriny na tsy nalefa ihany koa ny tany aminy. Ny tao amin’ny fjkm Ambavahadimitafo ihany no reko fa namaky ilay hafatra. Vaka ny saina manoloana izany toe-javatra izany. Inona ny antony tsy namakiana ilay hafatra tany amin’ny fiangonana sasany ary namakiana azy kosa tany amin’ny fiangonana sasany. Nizara ve ny hevitra manoloana ilay fanambarana ? Fampiraisana no tena tanjona ka toa fisarahana no hita !